‘गुठीका जग्गा संरक्षणका लागि सरकार लागि परेको छ’ : RajdhaniDaily.com -
Home राजनीति ‘गुठीका जग्गा संरक्षणका लागि सरकार लागि परेको छ’
काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका जग्गाहरु संरक्षण गर्नका निम्ती सरकार लागिरहेको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन अनुगमन समितिले तयार गरेको मस्यौदा अध्ययन प्रतिवेदनमाथी आज आइतबार समितिले गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
गुठीका जग्गाहरु राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले आफु मन्त्रालयमा आइसकेपछि संरक्षणका निम्ती लागिरहेको बताइन् । गुठी संरक्षण गर्नका निम्ती नै सरकारले गुठी विधेयक ल्याइएको कुरा दोहोर्यांउदै त्यो अहिले फिर्ता गएपनि पुनः ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताइन् ।
गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि नभएको भन्दै उनले गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढंगले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।’ उनले भनिन् ।
मुलुकभरकै गुठीका जग्गाहरु असुरक्षित भएको भन्दै मन्त्री पद्मा अर्यालले अतिक्रमण भएका जग्गाहरु फिर्ता ल्याउन सरकार लागिरहेको बताइन्
पुर्खाहरुले परोपरकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरेको भन्दै उनले पुर्खाले गरेको दान अहिले विभिन्न व्यक्तिहरुले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको बताइन् । ’जुन मनसाय, परोपकारी भावनाका साथ धार्मिक उद्देश्यले पुर्खाहरुले दान गरे । त्यसको संरक्षण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागीपरेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् । सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ती मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग बनाएर अहिले काम भइरहेको उनको भनाई थियो ।
मुलुकभरकै गुठीका जग्गाहरु असुरक्षित भएको भन्दै उनले अतिक्रमण भएका जग्गाहरु फिर्ता ल्याउन सरकार लागिरहेको बताइन् । गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोहिहरुको हक स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले मर्कामा परेका किसानहरुलाई न्याय दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताइन् । ‘धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने र गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसानहरुको हकलाई स्थापित गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘यी तिनवटै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना सहित हामीले गुठी विधेयक ल्याएका थियौं । तर त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्यो ।’
यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने कानुन ल्याउन नसक्दासम्म समस्याको समाधान नहुने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । समस्या समाधान गर्ने भनेको विधि विधानबाटै भएको भन्दै उहाँले यही कुराको शुरुआत मन्त्रालयले गरेको बताउनुभयो । ’गुठी विधेयक रोकिएको यहाँहरुलाई थाहै छ । तर हामी पुनः ल्याउछौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’मन्त्रालय एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन समिति बनाएर काम अगाडी बढाएको छ । त्यसमा यो भूमि ऐन पनि समावेश छ ।’
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक र यसको सन्देश
प्रेमलकुमार खनाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी एकता पछि झन्डै २१ महिनासम्म बैठक बस्न सकेको थिएन । यसले गर्दा सिंगो पार्टी पंक्तिमा...
Breaking News Roshan Shrestha - March 29, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्किन सरकारले जारी गरेको आदेश उल्लङ्घन गर्ने ६०० भन्दा बढीलाई आज बिहानै प्रहरीले ‘होल्ड’ गरेर...
किन बनेन लगानीको वातावरण ?
नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशत छ । जनआन्दोलन–१ पछिको प्रारम्भिक वर्षहरूमा यो करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । हाल नेपालमा...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाको विघटन स्थिरता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि भएको बताएका छन् । पार्टी विभाजनपछि तीन...